41 qof ayaa lagu qabtay waxyaabo qaraxa oo qarxin karay caasimada Khartoum oo dhan – Hagaag.com
41 qof ayaa lagu qabtay waxyaabo qaraxa oo qarxin karay caasimada Khartoum oo dhan
Posted on 16 Seteembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Xeer Ilaaliyaha guud ee Sudan Taj Al-Sir Ali Al-Haber ayaa Maanta oo Arbaco ah ku dhawaaqay in gacanta lagu dhigay waxa uu ku tilmaamay unug argagixiso iyo tiro badan oo walxaha qarxa ah oo lagu qabtay caasimada Khartoum.
“Ciidamada Taageerada degdega ah waxay 12 dabin ay dhigeen ay keentay in gacanta lagu dhigo 41 argagixiso iyo walxaha qarxa ee halista ah ee qarxin kara caasimada oo dhan,” ayuu al-Haber ku sheegay shirkiisa jaraa’id.
Wuxuu intaas ku daray, “Waxaan soo qabannay tiro aad u badan oo ammonium nitrate ah markii aan duullaanno ku qaadnay” bariga Niil ee caasimadda, isaga oo carabka ku adkeeyay in walxaha qarxa ee la qabtay ay aad khatar u yihiin, oo ay ku jiraan waxyaabo la mid ah kuwii baabi’iyay dekedda Beirut.
Dacwad oogaha guud ayaa qiray intii uu ku guda jiray shirka jaraa’id oo uu ku qabtay xarunta dacwad oogaha ee magaalada Khartuum in mas’uuliyiinta sudan ay ogaadeen in ay jiraan “unugyo argagixiso” oo ku sugan Khartoum ayna ku howlan yihiin sidii loo kala furfuri lahaa.
Howlgalka waxaa fuliyay ciidamo isku dhaf ah oo ka kala socda booliska, sirdoonka iyo xoogaga taageerada degdega ah, kadib dabagal amni oo socday in ka badan bil.
Baaritaano lagu ogaanayo qorshaha iyo ujeedooyinka kooxda argagixisada ah ayaa socda, iyadoo la rabo in la ogaado sida ay ku heleen hubkan gaar ahaan walxaha qarxa ee la qabtay oo ah kuwo aad u horumarsan oo laga heli karo oo keliya warshadaha militariga.
Dhiniciisa, afhayeenka ciidamada taageerada degdega ah, Sareeye Guuto Jamal Jumaa, ayaa xaqiijiyay qabashada kooxdan oo heysata walxo qarxa oo aad u tiro badan.
Waxa uu tilmaamay in waxyaabaha qarxa ee la qabtay ay ka mid yihiin 850 walxaha qarxa ee TNT, 3594 gumuc qarxa, iyo afar jawaano oo ku jira budada Nitrate.
Wuxuu shaaca ka qaaday in qeyb kamid ah walxaha qarxa ee la qabtay loo adeegsaday isku daygii la doonayay in lagu qarxiyo kolonyo baabuur oo uu la socday Ra’iisul wasaare Abdullah Hamdok bishii Maarso ee lasoo dhaafay.
Wuxuu xusay in walxaha qarxa laga soo buuxiyay goobaha rasmiga ah, wuxuuna sheegay ka ganacsiga waxyaabaha qarxa laga iibsado kooxo isku duuban.